mhando 0.5.3 – Kugona kushandura maURL
Chikumi 1, 2010 kubudikidza chipo 44 Comments
shanduro itsva iyi ambotirega maURL panzvimbo kuti kushandurwa kuti kupiwa chipfuro mitauro. Tinoda kutenda Hans kubva Cosmedia (website pamusoro zvizorwa kuvhiyiwa uye kurapwa) nokuti kutsigira basa rinoitwa pasi chikamu ichi, uyewo kutsigira chigamba kutsigira tsika permalinks plugin. Kana uri kurasikirwa zvakakurumbira, kusika tikiti kwatiri panguva kukura nzvimbo uye ticharamba kuwedzera kuti kwedu todo pasi. Kana uchida kutibatsira, kutsigira zvakakurumbira kukura kuchatibatsira kuti zvichiitika nokukurumidza, uye nharaunda kuwana chigadzirwa zvizere.
Kunewo zvimwe zvinhu aisanganisira dzakadai chokwadi chokuti mhinduro zvakaitwa mitauro zvakasiyana kupfuura default mumwe anozivikanwa sezvo vakadaro uye vave translatable panguva mutauro default (unofanira unotara kushandurira mutauro default Ipfungwa mu pazviruva), rutsigiro nani Wordpress Super cache plugin, uye ndiwedzere diki iri jQueryUI shanduro kushandiswa kuti anobatsira vane Wordpress 3.0 rutsigiro kuuya.
Last chinhu pamusoro ichi chiziviso zvakarongwa kuti tinoda kuziva kuti tine peji yedu pakukura panzvimbo apo isu tirambe rechitatu bato plugins kugarisana mazita (pamwe makwapa akasvibirika kana ndouya). On wiki Vasai yedu plugin rutsigiro chizvaro peji, sezvo kwayo ane wiki Vasai, chete kusika munhu rokushandisa panzvimbo uye kunzwa vakasununguka aongorore uye kuvandudza ichi.
Ina Under: General Messages Tagged With: mipiro, kuduku, rusununguko, SEO, trac, Wordpress 3.0, netori-super-cache
Chikumi 1, 2010 pa 8:02 pm
I upgraded nhasi… asi plugin zvino vakarega pakushandura.
Uyewo sei URL traslating basa? sezvo ini dont kuona chinhu kushanda kuti kana.
Chikumi 1, 2010 pa 8:28 pm
The URL Shanduro anotora zvikamu URL dziri translatable oedza kushandura navo neshure, akatambanudza ndiko kana peji akasikwa, maURL zvose inotsiviwa neshanduro dzavo, uye shure, apo rokushandisa anokumbira URL yakadaro, ari plugin anoudza Wordpress iyo peji inodzidzisa chaizvoizvo akataura. unofanira vakwanise rutsigiro nawo pazviruva.
I vangafara kuongorora nei plugin vakarega kushandura, asi ndinoda vamwe URL kutarisa…
Rob Davies anoti
Chikumi 1, 2010 pa 8:06 pm
Shanduro URL wacho!!- Ndave ndichitsvaka kumativi nokuda plugin shanduro yakanga chaizvoizvo useable uye nhasi (zuva mukasunungura URL rokushandura shanduro) Ini ndauya mhiri plugin yako – kuvonga zvikuru!
Vakambova Kutarira uye zvinoshanda zvikuru – kupfuura chinhu kunze uko.
Zvinhu I chaizvo kufanana nezvazvo vari:
– Url shanduro
– papeji fora
– anochengeta tsika nemasaisai Kurongwa chete
– Kunyange anoshandura All umwe Seo Meta uye rondedzero!
naka – Ndatenda…..
Chikumi 1, 2010 pa 8:29 pm
Tinotenda kuti compliments… Mazano kuvandudza vaizove kukosheswa
Chikumi 2, 2010 pa 6:01 pm
Ndinokutendai nokuti plugin ichi chikuru. Nhasi I upgraded kuti kuvatsva shanduro. It Mabasa sezvaitarisirwa. Asi pane vamwe kukanganisa kuduku Ndinofunga.
The default mutauro kushandiswa padandemutande wangu Bahasa Indonesia. pashure upgrading, zviri kuva Chirungu pamusoro frontend apo zviri arun peji yacho isina kuchinja.
Ndakagara edza kuita Chirungu sezvo yangu default mutauro arun peji uye zvinoshanda. ndokubva, changed kuidzosera Bahasa Indonesia, asi frontpage vachiri kuratidza Chirungu kubudikidza default.
Handina apo kukanganisa chaizvo. Ndichiri chamber nayo apo kunyora izvi. Zvimwe zviri zvinobva mubrowser cache, asi handifungi kudaro.
Ndinokutendai nokuti chero rubatsiro..
Chikumi 2, 2010 pa 7:01 pm
Ndiri kuona kwenyu nzvimbo muna Bahasa, pamwe iwe zvakaita mutauro vasabatwa chikabviswa iyo anotumira kuti peji yacho Chirungu, ari URL kuchinja ako kero kamwechete?
Chikumi 2, 2010 pa 7:08 pm
zvino ndava kuona kuti ayo zvimwe dambudziko chete mutauro default, ndapota edza vachizvuva Basha kumusoro, uye inofanira kushandura. kana hazvishandi, Ndinenge kutaura iwe zvakananga
Chikumi 3, 2010 pa 5:46 pm
Chekutanga, Ndinoda kukutendai rubatsiro rwenyu asi nanhasi hapana rubatsiro zvakare nekuti dandemutande yangu yambomiswa pasina chiziviso. Unofungei?
Aihwa, Handisi kureva kuti nokuda plugin kwenyu, asi ndinongoda funga sei hondo Server arun kumisa nyaya yangu apo ndiri vachigadzira Website yangu nokuti ndinoziva kune dambudziko, uye izvozvo pasina chiziviso zvakare. Hazvina kunaka, hazvisi?
Chikumi 2, 2010 pa 8:19 pm
Ndinokutendai nokuti mhinduro iyi kutsanya. Zviri zvino Bahasa apo ini kushandura default mutauro kuna Chirungu. Kana ndaisa mutauro default kuna Bahasa, zviri kuratidza Chirungu sezvo default.
Chikumi 4, 2010 pa 1:36 pm
basa Awesome vane shanduro namagwatidziro maURL, kuti”That batsira chaizvo uye kuchakubatsira zvikuru SEO. Asi chii pamusoro mapeji? I kuwana kukanganisa 'peji akasawanikwa’ kana ini tinya peji Link kuti rakashandurirwa, pambiru maURL vari akanaka akafanana ndakati, Ivo vari kuwana pasina kukanganisa. Sei izvi kuitika?
Chikumi 4, 2010 pa 1:38 pm
One chimwe, kana ini kuwana 'peji akasawanikwa’ mhosho, peji reverts kudzokera Default Chirungu shanduro. Izvi zvichaita netsa vashanyi zvine reselect mutauro wavo zvakare, mumwe parumananzombe kwaizova kukuru. Ndatenda
Chikumi 13, 2010 pa 5:19 pm
Saka hapana shoko iri kukanganisa uku?
Chikumi 14, 2010 pa 11:13 ndiri
Taifunga wakaiswa pamusoro 0.5.4 (zvakaitika izvi pamapeji aiva somuenzaniso mhoro (nokuti Hindi) mu thier URL, uye akava rakashandurwa) kana ichiri zvinoitika, chete pindura aine URL kwatiri tiedze.
urombo kwete pakupindura takakurumidza, uye godspeed
Chikumi 5, 2010 pa 6:45 pm
Parse kukanganisa: nemarongerwo kukanganisa, chisingatombotarisirwi $ mugumo /home/****/public_html/starwallpaper.info/wp-content/plugins/google-sitemap-generator/sitemap-core.php pamutsetse 2131
wokwaEfremu update itsva plugin, uye chigamba chitsva asi vakanga akazviratidza. ndiudzei sei kurigadzirisa.
Chikumi 6, 2010 pa 2:04 ndiri
Sei vari kunze hurongwa arun iri Widgets? Uye nei Handikwanisi pamusoro shanduro chepakutanga Newest shanduro yokugadziridza?
Ndakaedza kuti 0.3.4 Shanduro uye vakashanda zvakanaka ikoko Widgets iri arun asi handigoni kushandura ikoko.
Ndinovimba kuti chinotevera shanduro kare vanokanganisa unokwanisa akasununguka zvino ndiani.
Zvisinei zvakanaka zvishomanana chishongedzo!
It, kuti regai zvose basa I anofanira kushandisa 0.5.2 shanduro kurutivi, asi ari Widgets kukanganisa uzvinyore sezvinoratidzwa mumufananidzo nayo.
Chikumi 6, 2010 pa 12:07 pm
Handisi kunzwisisa kwenyu mibvunzo miviri yokutanga, saka ndapota nepamwe navo
Neniwo usaswedera kukanganisa waunoona, It haruzvitsvakiri kuva mubumbiro yangu, kunyange zvingava, Izvi kuenda apo transposh akaremara?
Chikumi 6, 2010 pa 9:43 pm
My Chirungu zviri zvishoma murombo ndinokukumbira iwe ichi ndine hurombo.
Kana transposh dzikava kure ipapo zvakanaka zvose mabasa.
mubvunzo wangu wokutanga ndiye: Seiko kushanda Widgets ari arun pemvura kana transposh anogoneswa?
My wechipiri: Sei handigoni kushandura vari zvizivikanwe shanduro itsva pa 0.5.3 kana Ndinoshandisa pepeta rokushandura?
Ndinofanira kushandisa 0.5.2 shanduro becouse ndinogona kududzira iyi.
Asi dzakabvarurwa asi panguva kwandiri vakwanise default mutauro rokushandura uye ndiani anoziva izvozvo asi chii haisi workin.
Ko chikanganiso ichi kuitika neni chete?
Chikumi 6, 2010 pa 10:05 pm
Ndinovimba ndakatenga zvakanaka nguva ino
1. Hatina vakwanise pamusoro arun inowanikwa, nekuti zvichava yakawandisa basa shoma tibatsirwe, We vanosarudza bhizimisi nguva dzimwe, (tinovimba) zvinonyanya kukosha zvinhu
2. Kwete, isu kufembera kapukanana crawled ikoko, 0.5.4 anongova kunze – Ndapota tambozviedza
Chikumi 6, 2010 pa 10:50 pm
Ndakaedza 0.5.4 Shanduro asi urombo hapana yachinja.
Chikumi 6, 2010 pa 10:51 pm
Ndakaedza kuti 0.5.4 Shanduro asi urombo hapana akachinja.
Chikumi 7, 2010 pa 7:35 ndiri
Ndinokutendai plugin ichi chikuru uye urombo Chirungu wangu zvakaipa.
Ndine dambudziko transposh: kana Ndikaisa mumhanyi, asingaiti kushandura mitauro.
Ndinokutendai nokuti chero rubatsiro.
Chikumi 7, 2010 pa 7:48 ndiri
Ndinoona kuti nzvimbo yako kushanda, nekudzvanya petsanga kuchinja kuti mitauro yakasiyana-siyana, uye kupedzisa shanduro,
Unofanira kuva chaiwo panyaya chii haasi kushanda
Chikumi 7, 2010 pa 8:04 ndiri
ofer ngaavongwe nokuti mhinduro …
Pandinovabvunza murayiro “Translate All” Handigoni achaipedzisawo.
Chikumi 7, 2010 pa 8:09 ndiri
murayiro uyu anononoka, kuitira kudzivisa mukusika motokari yakawandisa paGoogle servers. Unogonawo nemutemo, edza kushandisa kubva akasiyana Rinozvikudza ip, kana vangomirira.
Chikumi 7, 2010 pa 8:27 ndiri
Ndakaedza kuwedzera imwe Link haasi kushanda:
Ini regai murayiro “Translate All” zvose usiku ichigere kupera.
Zvinoita sokuti chivhariso-mu zvinogumbura.
Pamberi chivhariso-yaiva zvikuru nokukurumidza.
Chikumi 7, 2010 pa 9:17 ndiri
zvakare, ichi linked mabasa, Ini pfungwa iwe kuedza kuwana kubva yakasiyana kombiyuta / Browser. The kushandura inomira zvose 5 masekondi pakati mumwe wokuti rokushandura, kana uchida kuenda nokukurumidza, unogona aongorore bumbiro
Uye kana uchitenda nzvimbo iri nomumugwagwa kwaitora nguva, ichi pamwe ichokwadi, asi kugadzwa APC kunobatsira chaizvo
Chikumi 7, 2010 pa 9:54 ndiri
Ofer Thanks rubatsiro …
Chikumi 7, 2010 pa 10:04 ndiri
Its ive akisarareta nokuda PHP, uye transposh anoita kurishandisa kuti vadzivise Database kuwana
Chikumi 7, 2010 pa 1:07 pm
Ndinokutendai nokuti rubatsiro rwako.
Chikumi 8, 2010 pa 1:27 pm
Ndichine matambudziko transposh.
Haakwanisi kuita shanduro.
Kupi I tatadza?
Chikumi 8, 2010 pa 2:00 pm
kana kubatana uku:
Chikumi 9, 2010 pa 8:33 ndiri
Kunyange nhasi zvimwechete:
I akawedzera itsva pambiru kuna netori arun Panel 2.9.2
rarira pamusoro “fefeta” kuti achengetere Post, Zvisinei, shanduro zviratidzi mumabhokisi Transposh akakiyiwa uye haifambi.
Kana iwe tarisa shanduro kubva kurutivi mushandisi, rugwaro rwacho harusi rakashandurwa asi anoramba mumutauro wepakutanga.
I akaedzwa nemumwe Browser, asi anozviita nenzira.
Ndinokutendai zvakare rubatsiro rwenyu.
Chikumi 13, 2010 pa 6:45 pm
Zvino mabasa ose ….
Thanks zvakare rinokosha rubatsiro.
Chikumi 14, 2010 pa 7:17 ndiri
regerera, asi ini zvakare kiya kukwira dambudziko.
The zviratidzi mu “bhokisi Transposh” Vari akakiyiwa uye haifambi.
Ini rarira bhatani “kushandura All” uye akakwanisa kuita shanduro (basa rose usiku).
Before “kushandura zvose” Mitsara akashandurwa 197624, pashure 207311.
Zvino haachatyi anoita shanduro mumitauro itsva romukova uye kukurukurirana kwacho.
Ndinofunga pamwe zvishoma tsikidzi.
Asi ndinovimba kuti amuone basa sepakutanga ….
Chikumi 14, 2010 pa 11:11 ndiri
Uri kushandurwa yakawanda zvimedu, zvichida Google injini anoona iyi isiri nzira. I hunoratidza kuedza kubva yakasiyana kombiyuta / Rinozvikudza ip. Zvinogonekawo kuti muitiro anokurumidza kuburikidza Editing kunobva remitemo.
Rob Daves anoti
Chikumi 14, 2010 pa 10:14 ndiri
Just vaviri mibvunzo / zvinogoneka zvikanganiso:
– dzimwe nguva URL asingadi kushandura zvakanaka, pane imwe nzira yokuchinja ichi sezvo permalinks kunhonga untranslated chinyorwa (anowanzoita chete chete kana 2 Mashoko ari Url)? Ini chete aiva mumwe Kutarira uye ndinofunga kuti dambudziko iri kuti Title haasi rakashandurwa zvakanaka (sezvo zvanzi permalinks vari kunhonga) pane imwe nzira kuti vaone musoro sezvo kuchinja permalinks pashure Posting ari kurwadziwa. Uyewo dzimwe nguva izvozvo doesnt kushandura catagory.
– Pane zvakadaro kurishandura peji panobva remitemo (eg Meta tsananguro)
– kana tiri wacho mapeji inochengeterwa kumwe pamusoro Server forodha kuitira inogona Akave nokuvandudza ikoko?
Chikumi 14, 2010 pa 11:09 ndiri
The dzimwe nguva ndiye apo URL rakanga risati rakashandurwa, kana iwe kwakaita kushandura pamusoro romukova kunofanira kuitika asi nokukurumidza, ari kushandurira zvose rinoshandawo, Zvisinei zvinosuruvarisa kwakanga kuchine pasina nzira yokugadziridza shanduro iyi. Achava vamwe ramangwana 😉
akanaka Kuwedzera kungava kuti pave 301 pakaziviswa URL haisiri yakarurama, Zvisinei ichi chingava runonyengera chigamba uye isu hatisi chokwadi tinoda kutarisa edu simba ikoko.
Rondedzero Meta riri kuitwa rakashandurwa, sezvo zvakanaka sezvo plugin anozvigona zvino. Pfungwa ndechokuti ramangwana Shanduro kuuya tichasangana pave inowanikwa kuratidza zvimedu zvose kuti ariko papeji, zvinangwa zvaisanganisira.
Hapana mapeji zvakachengetwa pamusoro Server kuti fora, asi iwe unogona nguva dzose dzifambirane tafura rokushandura zvakananga, kunyange handidi vanoti ichi.
Chikumi 14, 2010 pa 11:34 ndiri
Thanks mhinduro dzako. Chokwadi chokuti Dzvene pakupera aigona aigona kukonzera okupedzisira shoko kwete kushandura? Uyewo pashure ashandura permalinks handishanduki (pashure kushandisa muenzaniso% romukova% ) Kana Ndikarinzira kudzokera kunyora uye reposted basa iri vachatitaka?
Uyewo Widget nokuda transposh – zvingava zvinobvira kuva pamusoro somunhu Header kumusoro saka musi everypage petsanga somunhu Header duku achimhanya mhiri pamusoro peji nokuda nyore kufamba?
Kana mapeji havasi mapeji sei kutsvaga injini kuona anochengeterwa tafura rokushandura uye kuverenga izvi sezvo mapeji?
Chikumi 14, 2010 pa 11:44 ndiri
vazhinji mibvunzo, Hedzino dzimwe mhinduro:
1. ehe, ari Dzvene zvimwe dzivaidza
2. yochinja rekukwazisa shanduro aripo navo, chete reposting dzinowanzoona zvakanaka zvakakwana, asi kushandura zvose zvichida imwe pfungwa zvakadaro nani
3. Ndinofungidzira zvinokwanisika, unogona kunge tweak bumbiro remitemo zvishoma
4. Mapeji Shanduro vari mapeji zvikuru yenyu Wordpress mapeji vari mapeji, saka munhu Crawler paging pamusoro mapeji iwayo zvimwe peji pavo peji aizongova anofanira paged
Chikumi 29, 2010 pa 8:56 ndiri
Thanks mhinduro dzako. Just wakaita zvimwe mberi kuongorora uye pane wandei 404 zvikanganiso izvo Dzakafanana:
(URL) /chikamu / Ipfungwa,com_frontpage / Itemid,1/chete,izvozvo /
Ini vakawedzera kwete 404 zvikanganiso Plugin uye ndinovimbawo ichi inoshanda.
Ini ndiri kuwana wandei nouya Meta Rondedzero uye rokuremekedza Tags – uripo zvakadaro kumativi ichi?
Chikumi 29, 2010 pa 9:35 ndiri
The Meta nyaya ari akashanda, uyewo chinozadzwa rinoshandurwa kana inopindirana kumbova mutsara papeji, yemberi shanduro achaita anokurukura ichi nani.
Handina kuwana 404 zvikanganiso, avo hazvifaniri kuitika, asi kana uchida kuona chaizvoizvo kwavari Ndinoda kuona URL kuti pave Links dzakaipa dzakadaro
Chikumi 29, 2010 pa 11:00 ndiri
The Redirect plugin vakaita wemanomano sezvo 404 zviri zvose redirecting kuti yakatarwa peji. Ngatitarise http://www.calabria2010.com/calabria/component/option,com_weblinks/task,view/catid,922/id,21/lang,it/
sezvo muenzaniso peji akasikwa uye ikozvino redirected.
Kana Meta ndinoshandisa wokutanga 160 Mashoko pambiru nokuda Excerpt – Ndiri kushandisa zvose umwe seo riri uko dambudziko ringava. Dzimwe nguva anoshandurwa vamwe ichi asi kazhinji havasi vose.
Kutarisira update… kuvonga zvakare.
Mbudzi 25, 2010 pa 6:06 pm
Hi ndinoda plugin wako, asi ndiri kuva nechinetso peji imwe: izvozvo rakashandurwa musika murimi ukama ‘ kusaina pamusoro URL, saka ndinofunga kuti anoramba kushanda zvakanaka…
Unogona kuona kukanganisa nokutaura nekudzvanya pamusoro USA mureza (yokumusoro rworudyi kona) pamusoro batanidzo ichi:
Chero pfungwa sei aigona I kugadzira ichi? Zvichida unobata chinhu pamusoro Database kana transposh cache?
Mbudzi 25, 2010 pa 7:03 pm
Saka kana munhu achiuya mhiri dambudziko rangu, unofanira kuita bvunzo pambiru nemashoko okuti mukati kopi, vane rakashandurwa uye gadzirisa shanduro kutora apositurofi kubva mairi, izvozvo achasimbisa URL chepakutanga rakashandurwa romukova. Hazvina vakakwana Zvisinei nokuti mashoko achava zvakaipa (vachisiya Farmers Market pane Farmer kuti Market) asi chinhu nokukurumidza parumananzombe.
Ndinokutenda chaizvo nokuda pfungwa Ofer.